ဒေါက်တာမြဝတ်ရည်အား ဆဲဆိုကြိမ်းမောင်း၍ ဝက်အူလှည့်ဖြင့်ထိုးမှုဖြစ်ပွား. - Sweet Myanmar
ဒေါက်တာမြဝတ်ရည်အား ဆဲဆိုကြိမ်းမောင်း၍ ဝက်အူလှည့်ဖြင့်ထိုးမှုဖြစ်ပွား.
ဒေါက်တာမြဝတ်ရည်ဆိုရင် မသိတဲ့သူ မရှိလောက်ပါဘူးနော်. .ဘဏ်နဲ့ အချင်းများမှု ကိစ္စ. မီးသတ်တပ်ဖွဲ့နဲ့ အချင်းများမှု ကိစ္စများကို fbပေါ် Liveလွှင့်ခဲ့ရာမှ စ၍ မှန်တယ်ထင်ရင် ဒဲ့ရှင်းတတ်သော ဆရာဝန်မလေးအဖြစ် လူသိများလာခဲ့ သူဖြစ်ပါတယ်. .
မနေ့က စက်တင်ဘာ ၁၀ရက် ၂၀၁၉ ည ၁၀နာရီကျော် အချိန်ခန့်မှာတော့ ကားလမ်းကူးဖို့ လုပ်နေစဉ်မှာ ကားတစ်စီးပေါ်မှ အရက်မူးနေသူ အမျိုးသား ၄ယောက်က စနောက်လှောင်ပြောင် ပြောဆို နှောက်ယှက်လာပြီးနောက်. . .
အပြန်အလှန်အချင်းများ အငြင်းပွားမှုများ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီး ထိုသူများမှ ဆဲဆိုမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့သည့်အပြင် တစ်ဦးမှ ဝက်အူလှည့်ဖြင့် ဒေါက်တာ မြဝတ်ရည်အား လှမ်းထိုးကြောင်း သိရှိရပါသည်. . .။
လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာနဲ့ ဖော်ပြထားသော ဖြစ်စဉ်မှာ. .အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်. . ။
ည ၁၀နာရီကျော်က မိတ်ေ​ဆွတစ်ယောက် မုန့်ဟင်းခါး လာစားလို့ ဖုန်းဆက်တော့ အလုပ်ကိစ္စပြောဖို့လည်း ရှိတော့ အာရောဂျံ မဂ္ဂဇင်းစာအုပ်ပေးဖို့ အောက်ဆင်းလာတော့ ကားလမ်းကူးဖို့ လုပ်နေတုန်း ကားတစ်စီးလာလို့ လမ်းဘေး ပြန်ရှောင်ပေးတာကို မှန်တွေ အကုန် ချထားတဲ့ ကားနောက်ခန်းကနေ တစ်ယောက်က ချွတ်ချွတ်ဆိုပြီး နှုတ်ခမ်း ဆူပြတယ် ။
ကားကို တမင် ရပ်ပြီး ဘယ်သွားမလဲ ဘာလုပ်မှာလဲ ကားပေါ်တက်ဆိုပြီး ပြောတော့ Taxi ထင်ပြီး မိတ်ဆွေကားကို လက်ညိုးထိုးပြပြီး စကားနည်း ရန်စဲ ကားကို ပတ်ပြီး ဟိုဘက်ကားဆီ သွားပါမှ . .
အိမ်စီးကား ဖြစ်ပြီး ကားပေါ်ပါ ၄ယောက်လုံး မူးနေတာ ကားပေါ်ကနေ ထပ်ပြောနေလို့ အရက်မူးနေရင်လည်း ​အေးဆေးနေပါ ။ မကောင်းတဲ့ မိန်းမ မဟုတ်ဘူး …အဲ့လို မပြောပါနဲ့ ပြောတာကို နောက်က ကောင်က စောက်ရူးမ စောက်ကြီးစောက်ကျယ်ဆိုပြီး ပြောတယ် တော်တော် ရိုင်းပါတယ် ။
မကောင်းတဲ့ မိန်းမ ထင်ပြီး ကားပေါ် ခေါ်လည်း မှားသွားရင် မသိလိုက် မသိဘာသာ မသွားပဲ ထပ်မိုက်ရိုင်းနေလို့ မူးနေရင် မိန်းမတွေကို လိုက်ရန်မရှာနဲ့ ပါးရိုက်ခံရမယ်လို့ ပြောတာကို ကားပေါ်က ဆင်းလာပြီး ယောကျာ်းနှစ်ယောက် မိုက်ကြေးလာခွဲပြီး FB cele ကောင်မပဲဆိုပြီး မှတ်မိသွားတော့မှေ–ိုးမ လို့ ဆဲသွားပါတယ် ။
199 ကို ဖုန်းဆက်ဖို့ သတိရပြီး ဖုန်းဆက်နေတုန်း ကားက မောင်းထွက်သွားပြီဆိုပြီး ရဲစခန်းသွားရနိုး မောင်းထွက်လိုက်တော့ သူတို့ကားက လမ်းအလယ်လောက် ဘယ်ဘက်မှာ ရပ်ထားတာ 199 နဲ့ ပြောနေတုန်းဆိုတော့ ကားရှိသေးတယ်ဆိုတော့ စောင့်နေပါဆိုလို့ တော်တော် လှမ်းမှ ညာဘက် ချရပ်ထားတုန်း . .
ကားမှန် လာခေါက်ပြီး ပြသနာရှာပြီးေ–ိုးမလို့ ဆဲတဲ့သူရယ် ကားမောင်းတဲ့သူရယ်. .သူတို့ အပျက်မ ထင်ပြီး ကားပေါ်ခေါ်တာ စတာတွေ ဆဲတာတွေ ချန်ထားပြီး ရန်ပြန်လာရှာပြီး တစ်ယောက်က ကားမှန်ချထားတဲ့ဆီကနေ ဝက်အူလှည့်နဲ့ လှမ်းထိုးပါတယ် . .
ကားမှန်ကို အတင်းပြန်တင်ထားတာကို လက်နဲ့ဖိထားပြီး လှမ်းထိုးတာ အလယ် ဂီယာပေါက် နားထိ နောက်ဆုတ်လိုက်လို့ လွတ်သွားပါတယ် ။မှန်ဖိထားတဲ့ လက်ကို ဖုန်းနဲ့ ရိုက်ပြီး မှန်ပိတ်တော့ ကားတံခါးက lock မချထားတော့ ဆွဲဖွင့်တာ ပွင့်သွားလို့ အတင်းပြန်ဆွဲပိတ်ရပါတယ် ။
ကူကယ်ရာမဲ့ 199 နဲ့ ဖုန်းတောင် မချရသေးဘူး. .ကားမှန်တွေ အတင်းထု ကားထွက်မယ် လုပ်တော့ Bonnet တွေ အတင်း ထုပြီး ရှေ့က ပိတ်ထားပါတယ် ။
၁၅မိနစ်လောက်အတွင်းကို ကမ္ဘာပျက်မတတ် အပြင်ကနေ -ာသယ်မေ- -လိုးမတွေ စောက်ရူးမ နင့်စောက်ဆင့်နဲ့ ဆိုပြီး အော်ဟစ်ဆဲဆို သောင်းကျန်းပြီး ဝက်အူလှည့်နဲ့ ထိုးဖို့ ကားအပြင်ကိုပဲ ထွက်လာဖို့ စောင့်နေပါတယ် ။
သူတို့ ကားဘေးဘက်ကို ခဏထွက်သွားတုန်း ရဲစခန်းဆီ အမြန်မောင်းထွက်ရပါတယ် ။သူတို့အပြောက ကားနဲ့မလွတ်လို့ ကားရပ်တာလို့ လိမ်ပါတယ် ။CCTV မှာ ကားလာလို့ လူက နောက်ဆုတ်ပေးလိုက်တာ အရှင်းကြီးပါ ။
ဝက်အူလှည့်နဲ့ ကားထဲ လှမ်းထိုးလို့ အတော်ကို shock ရနေပါတယ် ။ရဲတွေ စောင့်ပေမယ့်လည်း ဖြစ်နေတဲ့ မိနစ် ၂၀/၂၅ အတွင်း ကမ္ဘာပျက်မတတ်ပါပဲ ။
Video ရိုက်ဖို့လည်း သတိမရ နောက်တစ်ခေါက် ကားတံခါးလာခေါက်မှ ရိုက်ထားဖြစ်တယ် ။တော်တော်ကို သွေးပျက်စရာကောင်းပါတယ် ။FB cele လို့ မှတ်မိပြီးမှ ဝက်အူလှည့်နဲ့ ထိုးတာပါ
ရဲဆီ သွားတိုင်ဖို့ လိုက်ပို့ပြီး အပြန်ကျတော့ တစ်ယောက်တည်းမို့ ရဲတွေ ဆိုင်ကယ်နဲ့ ပြန်လိုက်ပို့ပေးခဲ့ရတယ် ။မလုံခြုံတော့တဲ့ ဘဝ အကာအကွယ်တွေ မဲ့နေသလိုပါလား” ဟူ၍ ဖြစ်ပါတယ်. . နော်
ဒေါကျတာမွဝတျရညျဆိုရငျ မသိတဲ့သူ မရှိလောကျပါဘူးနျော. .ဘဏျနဲ့ အခငျြးမြားမှု ကိစ်စ. မီးသတျတပျဖှဲ့နဲ့ အခငျြးမြားမှု ကိစ်စမြားကို fbပျေါ Liveလှငျ့ခဲ့ရာမှ စ၍ မှနျတယျထငျရငျ ဒဲ့ရှငျးတတျသော ဆရာဝနျမလေးအဖွဈ လူသိမြားလာခဲ့ သူဖွဈပါတယျ. .
မနကေ့ စကျတငျဘာ ၁၀ရကျ ၂၀၁၉ ည ၁၀နာရီကြျော အခြိနျခနျ့မှာတော့ ကားလမျးကူးဖို့ လုပျနစေဉျမှာ ကားတဈစီးပျေါမှ အရကျမူးနသေူ အမြိုးသား ၄ယောကျက စနောကျလှောငျပွောငျ ပွောဆို နှောကျယှကျလာပွီးနောကျ. . .
အပွနျအလှနျအခငျြးမြား အငွငျးပှားမှုမြား ဖွဈပျေါခဲ့ပွီး ထိုသူမြားမှ ဆဲဆိုမှုမြား ပွုလုပျခဲ့သညျ့အပွငျ တဈဦးမှ ဝကျအူလှညျ့ဖွငျ့ ဒေါကျတာ မွဝတျရညျအား လှမျးထိုးကွောငျး သိရှိရပါသညျ. . .။
လူမှုကှနျယကျစာမကျြနှာနဲ့ ဖျောပွထားသော ဖွဈစဉျမှာ. .အောကျပါအတိုငျးဖွဈသညျ. . ။
ည ၁၀နာရီကြျောက မိတျဆှတေဈယောကျ မုနျ့ဟငျးခါး လာစားလို့ ဖုနျးဆကျတော့ အလုပျကိစ်စပွောဖို့လညျး ရှိတော့ အာရောဂြံ မဂ်ဂဇငျးစာအုပျပေးဖို့ အောကျဆငျးလာတော့ ကားလမျးကူးဖို့ လုပျနတေုနျး ကားတဈစီးလာလို့ လမျးဘေး ပွနျရှောငျပေးတာကို မှနျတှေ အကုနျ ခထြားတဲ့ ကားနောကျခနျးကနေ တဈယောကျက ခြှတျခြှတျဆိုပွီး နှုတျခမျး ဆူပွတယျ ။
ကားကို တမငျ ရပျပွီး ဘယျသှားမလဲ ဘာလုပျမှာလဲ ကားပျေါတကျဆိုပွီး ပွောတော့ Taxi ထငျပွီး မိတျဆှကေားကို လကျညိုးထိုးပွပွီး စကားနညျး ရနျစဲ ကားကို ပတျပွီး ဟိုဘကျကားဆီ သှားပါမှ . .
အိမျစီးကား ဖွဈပွီး ကားပျေါပါ ၄ယောကျလုံး မူးနတော ကားပျေါကနေ ထပျပွောနလေို့ အရကျမူးနရေငျလညျး အေးဆေးနပေါ ။ မကောငျးတဲ့ မိနျးမ မဟုတျဘူး …အဲ့လို မပွောပါနဲ့ ပွောတာကို နောကျက ကောငျက စောကျရူးမ စောကျကွီးစောကျကယျြဆိုပွီး ပွောတယျ တျောတျော ရိုငျးပါတယျ ။
မကောငျးတဲ့ မိနျးမ ထငျပွီး ကားပျေါ ချေါလညျး မှားသှားရငျ မသိလိုကျ မသိဘာသာ မသှားပဲ ထပျမိုကျရိုငျးနလေို့ မူးနရေငျ မိနျးမတှကေို လိုကျရနျမရှာနဲ့ ပါးရိုကျခံရမယျလို့ ပွောတာကို ကားပျေါက ဆငျးလာပွီး ယောကျြားနှဈယောကျ မိုကျကွေးလာခှဲပွီး FB cele ကောငျမပဲဆိုပွီး မှတျမိသှားတော့မှေ–ိုးမ လို့ ဆဲသှားပါတယျ ။
199 ကို ဖုနျးဆကျဖို့ သတိရပွီး ဖုနျးဆကျနတေုနျး ကားက မောငျးထှကျသှားပွီဆိုပွီး ရဲစခနျးသှားရနိုး မောငျးထှကျလိုကျတော့ သူတို့ကားက လမျးအလယျလောကျ ဘယျဘကျမှာ ရပျထားတာ 199 နဲ့ ပွောနတေုနျးဆိုတော့ ကားရှိသေးတယျဆိုတော့ စောငျ့နပေါဆိုလို့ တျောတျော လှမျးမှ ညာဘကျ ခရြပျထားတုနျး . .
ကားမှနျ လာခေါကျပွီး ပွသနာရှာပွီးေ–ိုးမလို့ ဆဲတဲ့သူရယျ ကားမောငျးတဲ့သူရယျ. .သူတို့ အပကျြမ ထငျပွီး ကားပျေါချေါတာ စတာတှေ ဆဲတာတှေ ခနျြထားပွီး ရနျပွနျလာရှာပွီး တဈယောကျက ကားမှနျခထြားတဲ့ဆီကနေ ဝကျအူလှညျ့နဲ့ လှမျးထိုးပါတယျ . .
ကားမှနျကို အတငျးပွနျတငျထားတာကို လကျနဲ့ဖိထားပွီး လှမျးထိုးတာ အလယျ ဂီယာပေါကျ နားထိ နောကျဆုတျလိုကျလို့ လှတျသှားပါတယျ ။မှနျဖိထားတဲ့ လကျကို ဖုနျးနဲ့ ရိုကျပွီး မှနျပိတျတော့ ကားတံခါးက lock မခထြားတော့ ဆှဲဖှငျ့တာ ပှငျ့သှားလို့ အတငျးပွနျဆှဲပိတျရပါတယျ ။
ကူကယျရာမဲ့ 199 နဲ့ ဖုနျးတောငျ မခရြသေးဘူး. .ကားမှနျတှေ အတငျးထု ကားထှကျမယျ လုပျတော့ Bonnet တှေ အတငျး ထုပွီး ရှကေ့ ပိတျထားပါတယျ ။
၁၅မိနဈလောကျအတှငျးကို ကမ်ဘာပကျြမတတျ အပွငျကနေ -ာသယျမေ- -လိုးမတှေ စောကျရူးမ နငျ့စောကျဆငျ့နဲ့ ဆိုပွီး အျောဟဈဆဲဆို သောငျးကနျြးပွီး ဝကျအူလှညျ့နဲ့ ထိုးဖို့ ကားအပွငျကိုပဲ ထှကျလာဖို့ စောငျ့နပေါတယျ ။
သူတို့ ကားဘေးဘကျကို ခဏထှကျသှားတုနျး ရဲစခနျးဆီ အမွနျမောငျးထှကျရပါတယျ ။သူတို့အပွောက ကားနဲ့မလှတျလို့ ကားရပျတာလို့ လိမျပါတယျ ။CCTV မှာ ကားလာလို့ လူက နောကျဆုတျပေးလိုကျတာ အရှငျးကွီးပါ ။
ဝကျအူလှညျ့နဲ့ ကားထဲ လှမျးထိုးလို့ အတျောကို shock ရနပေါတယျ ။ရဲတှေ စောငျ့ပမေယျ့လညျး ဖွဈနတေဲ့ မိနဈ ၂၀/၂၅ အတှငျး ကမ်ဘာပကျြမတတျပါပဲ ။
Video ရိုကျဖို့လညျး သတိမရ နောကျတဈခေါကျ ကားတံခါးလာခေါကျမှ ရိုကျထားဖွဈတယျ ။တျောတျောကို သှေးပကျြစရာကောငျးပါတယျ ။FB cele လို့ မှတျမိပွီးမှ ဝကျအူလှညျ့နဲ့ ထိုးတာပါ
ရဲဆီ သှားတိုငျဖို့ လိုကျပို့ပွီး အပွနျကတြော့ တဈယောကျတညျးမို့ ရဲတှေ ဆိုငျကယျနဲ့ ပွနျလိုကျပို့ပေးခဲ့ရတယျ ။မလုံခွုံတော့တဲ့ ဘဝ အကာအကှယျတှေ မဲ့နသေလိုပါလား” ဟူ၍ ဖွဈပါတယျ. . နျော